ဝါကျတွေမှာ stress ကို နေရာပြောင်းတဲ့အခါ (3) ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 8:16 PM | No မှတ်ချက် | ‎Win Naing Oo‎ to အင်္ဂလိပ်စာစိတ်ဝင်စားသူများ
ရေးပြီဆိုမှတော့ တော်တော်လေးရောက်အောင် ရေးလိုက်ချင်တဲ့အတွက်
တင်ဆက်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ၊ အတော်အသင့် လေ့လာသူအဆင့်မှာတော့ မလိုအပ်သေးပါဘူး ။ သိချင်သူများ အတွက်တော့ သိဖို့ကောင်းတဲ့ ဗဟုသုတဆိုတာ ပိုတယ်မရှိပါဘူး ။ ၀ါကျထဲမှာ ရှိတဲ့ ဖိပြီးရွတ်ဆိုရမယ့် စကားလုံးတွေ (content/lexical words) နဲ့ ဖော့ပြီးရွတ်ဆိုရမယ့် စကားလုံးတွေ
(structure/function words) အကြောင်းကို ပြောခဲ့သလို ၊ ဖိသံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြား အချိန်အတိုင်းအတာ ညီတူဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို
Book ဆိုတဲ့စာလုံးဟာ နောက်ဆုံးဖိသံ ဖြစ်တဲ့အတွက် အမြင့်ဆုံးဖြစ်ရပါမယ် ၊ like မှာရွတ်ဆို တုန်းကထက် အသံပိုမြင့်ရမယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်)
ဒီလောက်ဆို stress ကိုသုံးပြီး emphasis လုပ်တတ်လောက်ပါပြီ ။ သို့သော်လည်း ကျန်တဲ့မှတ်သားစရာ လေးတွေကလည်း ရှိနေပြန်ပါတယ် ....................................................
(3) ပုံမှန်အားဖြင့် ဖိရွတ်ဖို့ မလိုတဲ့ အကူကြိယာ လေးတွေကို ဖိရွတ်လိုက်တဲ့အခါ အဲဒီဝါကျတစ်ခုလုံးကို အသားပေးပြောဆိုရာ ရောက်ပါသတဲ့ ။ ၀ါကျတွေက တစ်ခုထက်ပိုပြီး အများကြီး ရှိတဲ့အခါ .. အဲဒီ အကူကြိယာကို ဖိရွတ်လိုက်တဲ့ ၀ါကျဟာ ကျနော်တို့ အသားပေး ပြောချင်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်သွားပြီပေါ့ When we want to giveasentence positive emphasis in English, we normally put stress on the auxiliary verb (including the normal use of the verb BE).
ဥပမာ : She IS happy.
ကဲ..အဲသည်တော့ တကယ်လို့များ ရှီ(စ်)ဟက်ပီ လို့ မထွက်ပဲ ရှီ “အစ်(စ်)” ဟက်ပီ .. လို့များကြားရလျှင် တောကျတာလား ၊ တကယ်သိလို့ အသားပေးပြောချင်တာလားဆိုတာ ခွဲရခက်သွားပါပြီ ။ tongue emoticon .............................................................
DO sit down. She DOES like you. စသည်ဖြင့် ရှိပါတယ်
ဒီနေရာမှာ တစ်ခုကွဲပြားစေချင်တာက Main verb ကို stress လုပ်တာနဲ့ ၀ါကျ တစ်ခုလုံး အကျုံးဝင်စေတဲ့ Auxiliary verb ကို stress လုပ်တာ မတူပါဘူး .. ဆိုပါစို့
(5) အကူကြိယာတွေကို Stress လုပ်မယ်ဆိုလျှင် စကားလုံး အစီအစဉ်ကိုလည်း ပြောင်းနိုင်ပါတယ် With stressed auxiliary verbs, word order can change . .. Compare: You have certainly grown. (ဒါက certainly ဟာ grown ကို အထူးပြုထားတာ ဖြစ်တယ်)
. You certainly HAVE grown! (ဒီမှာတော့ certainly က have ကို အထူးပြုထားတာဖြစ်တယ် ၊ ဒါကြောင့် ဒီပုံစံက အကူကြိယာ have ကို stress လုပ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ပုံစံ ဖြစ်ပါတယ် ၊ ၀ါကျတစ်ခုလုံးကို stress နဲ့ အထူးပြုချင်လျှင် ဒီပုံစံ ဖြစ်ရပါမယ်) ....................................................
Some English words - for example at, for, have, and, us - have two pronunciations: one is used when they are not stressed, and the other when they are. Compare:
I'm looking at / ət / you. (အာ့ထ်..ဆိုတဲ့သံနဲ့ နီးပါတယ်) What are you looking AT / æt /? (အက်ထ် ဖက်ကို ပိုနီးပါတယ်)
. I was /waz/ late. (၀ါ့စ်..လိုမျိုး)
Yes, it was / wɒz /. (ဝေါ့ဇ်...လိုမျိုး) was က ၀ါကျနောက်ဆုံး ရောက်သွားတဲ့အခါ ဖိသံ အသံပြင်း ဖြစ်သွားပါတယ် ...........................................................
(7) အကူကြိယာ အဖြစ်သုံးတဲ့အခါ နဲ့ အဓိက ကြိယာ အဖြစ်သုံးတဲ့အခါ မှာ အသံထွက်လည်း မတူတာကိုလည်း သတိထားပါ ။ Where have /av/ you been? (ဟာ့ဖ် အသံမျိုး)
What did you have /hæv/ for breakfast? (ဟက်ဖ် အသံမျိုး) ဒီမှာက စားသည်ဆိုတဲ့ အဓိက ကြိယာအဖြစ်သုံးလို့ အကူကြိယာ အဖြစ်သုံးတဲ့ အသံထွက်နဲ့ မတူတာ ဖြစ်ပါတယ် ..